Jungle jaakbotyada Jungle jaakbotyada
0Ma doonaysaa in aad dareento biimayn Jungle iyo dareemayaa sida haddii aad boodayaa sida xayawaanka halkan iyo halkaas ka? gacantaada Isku day at this ciyaarta mid aad u cabsi badan oo xiiso leh super- Jungle jaakbotyada horumariyo by ay ciyaareyso ay ka talaabsan. loo Waxaad dib u qeybin doonaa si maalmood carruurnimada hore sida aad la kulmi doonaa mid aad u xaashaa guuxaysay cartoon clip ka da 'in- ka adventures of Mowgli ku salaysan Kitaabka Jungle ah by Rudyard Kipling.
Ciyaareyso ay ka talaabsan waa horumariyaha UK ku salaysan iyo waa qayb ka mid ah Germany ee Gauselmann Group. Kooxda istiraatiijiyad ah qorshaha isku dayayso in ay soo bandhigto kulan booska ku salaysan mawduuc caan ah sida ay u qabtay jaakbotyada kaymaha. Tani isla ciyaartoyda siiya rabitaanka ah in uu ciyaaro. Waxaa sidoo kale marketers siinaya fursado suuq gaar ah. Ciyaareyso ay ka talaabsan ku abuuray kulan badan oo caynkaas ah dhehay, naadi offline iyo online labada suuqa caalamiga ah ee casino.
The 5 set ku ambadeen wax lagu dhisay ee deegaanka Jungle ah ka gaartay isbaxtiya pages ee buugga in abaalmarinta jaakbotyada, unbaa siinaya magaca- Jungle jaakbotyada. Waxay leedahay 20 paylines.
qof kasta ciyaarta ayaa wax ama qof kale oo hadiyad in ciyaaryahanka. tusaale ahaan, haddii aad ka heli safanaya kooxda maroodiga dhexe ee duntu aad ku, ilaa 4 duntu isla jeedin doonaa duurjoogta. Sidoo kale, haddii aad ka heli daayeer ka kedis ah oo ka sarreeya duntu ku, oo waxay iyaga ugu soo jiid kartaa ilaa muujin calaamado duurjoogta Mire Waqaf. Waxa kale oo jira ah feature bonus oo xiiso leh bixiyey by KAA ama duurjoogta ee ciyaarta. Marka ay sidhab ah in ay meel, waxay siinaysaa ciyaaryahanka ikhtiyaarka ah uu ka soo xusho 3 dambiilood, kasta caynkooda ah nooc ka mid ah oo kala duwan oo bonus oo uu noqon karaa mid wareejin ah oo lacag la'aan ah ama wilds dheeraad muuqday Afyare. Mid ka mid ah dambiilood oo ay sidoo kale ku dhamaan karaa ciyaarta,.
kala duwan sharadka wuxuu ku bilaabmayaa ka £ 0.20 iyo kor u kaco ilaa £ 500 halkii wareejin. Calaamooyinka waxay isticmaali yihiin inta badan logos ciyaarta, oo ay la socdaan ekaayeen laambado dab, maddiibadood oo miro, iyo raaadkoodiiba duurjoogta.
Waxaa ka mid ah lacagihii kale bixiyeen waa abaalmarinta maqan Baloo iyo isku xigta Hot Bagheera ee. Waxa kale oo aad ku guuleysan karto abaalmarin lacag caddaan ah oo ah ilaa a 1000 jeer lacagta bet aad dhex Mowgli kii Escuardo on geedka tufaaxa ah, iyo wax kasta oo tufaax ah ee aan kala sooc lahayn ayaa shaaca ka qaaday abaal-marin lacageed this. Waxa kale oo aad ku qori kartaa abaal-marin lacageed this at saamiga haddii aadan aad u qanacsan abaalmarinta this. Si kastaba ha ahaatee, this sidoo kale keeni kartaa in laga badiyay lacag abaalmarin ah oo aad horay u kasbaday.
Jungle jaakbotyada waa stop saxda ah inaad ku wada harraad ciyaaraha aad. Ku dhowaad dhammaan kulamada ay ciyaareyso ay ka talaabsan ayaa ku guuleysanin abaalmarino badan sida kooxda design ay si joogto ah u dadaalaya in ay riixaan xuduudaha hal abuur leh Abuuridda boosaska sida kuwa faa'iido u shaqeeya casino, oo waxaa madadaalinta ciyaartoyda waqti isku mid ah. Oo waxay sameeyeen shaqo cajiib ah la Jungle jaakbotyada.